Wararka - Sida loo xusho daabku inuu waxtar yeesho
Telefoon: +86 757 2733 7134
Qoryaha Goynta Qoryaha
Sawir goynta looxa loo yaqaan 'Acrylic'
Sawir Goynta Aluminium
Sawirka Badeecada Goynta Calcium Silicate
Farta Joint Cutter
Khadka wax soo saarka qorista
Sida loo xusho daabku inuu waxtar yeesho
1. Fiiri alxanka qariibka daabkiisa. Qaybta ku xiran alladaha iyo jirka daabku waa inuusan u jaalle noqon sida naxaasta oo kale. Alxanku waa inuu noqdaa mid xoogaa caddaan ah, oo leh khad khafiif ah, oo aad u nadiif ah. Ma jiro miridhku naxaas cagaaran.
Waxay la xiriirtaa amniga, ma dooneysid garbaha birta ah ee duulaya markaad qoryaha jareyso. Waxay u xoog badan tahay sida qoriga yar-yar-yar.
Sidee loo xushaa daabku inuu waxtar yeesho?
2.Hal eeg baalalka miinshaarta leh ee fiiqan, waxaa jira afar dhinac oo fiiqan, laba dhinac, dusha ilkaha hore, dusha sare.Hrinding siman, no concave and convex, joogteynta wanaagsan, garabka daab daabkiisu Dillaacid la'aan ama aan xirnayn. Oo waxay ku dhajin doontaa miinshaar miinshaar leh xagga hore iyo gadaal hoose.
3. Markaad fiiriso dusha sare ee jirka filimka, saameynta sifaynta waa in lagu ogaadaa qof walba. Sifeeyaha isku dheelitirka khilaafku wuu hooseeyaa, ma fududa in lagu dhejiyo qori jajab ah iyo caag alwaax ah. Muuqaalku waa wanaagsan yahay.Waxaa lagu cabbiri karaa fiiri diyaaradda, ma noqon karto mid aan sinnayn sida weelka oo kale.
4. Haddii xaaladuhu kuu saamaxaan, waxaad ku rakibi kartaa miishaarka mishiinka oo aad tijaabin kartaa. Haddii aysan jirin wax buuq ama leexasho ah markaad mashquulsan tahay (Ka taxaddar waqtigan) Si tartiib ah ugu leexo gacantaada, qiyaas cabbirka socodka.
Sida hababka kormeerka xirfadeed, waxay kaliya ku tiirsan yihiin qalabka iyo qalabka cabbiraadda si ay u sameeyaan kormeer qoto dheer. Mashiinka dhoofinta dhoofinta ayaa dhammaantood ah 15.88mm iyo 25.4mm godad dhexdhexaad ah, iyo miraha miinshaarrada gudaha waxay u muuqdaan inay yihiin 20 ama 18.Haddii aad rabto saameyn wanaagsan oo goyn ah, 7 inji ayaa iibsan kara 40 ama 60 ilig, jarista 7 inji 16 ama 24 ilkaha ayaa noqon kara Toban inji 24 ilkaha, 40 ilkaha ayaa loo isticmaali karaa goynta, sax sax loo isticmaali karaa, 80 ilig ama 100 ilig.
Makiinad miinshaar wanaagsan ayaa gooyn karta si ka fiican dusha sare ee qorsheysan, oo aan lahayn wax dillaac ah oo geesaha ah, gaar ahaan haddii qoryaha si adag loo jaro. Taasi waa heer sare!
Waqtiga boostada: Jan-13-2021
Cinwaanka: No.1 Show Room, Lunjiao Alwaaxa Mashiinka Magaalada, Degmada ShunDe, FoShan City, Gobolka Guangdong, Shiinaha.
Fakis: +86 757 2733 7871
Gal Mashiinka miinshaaro-badan
Sawirka miraha badan - waxaa loo arkaa t ...
1. Fiiri alxanka qariibka daabkiisa. ...
Qaniinyada Arden Router
Taxaddarrada maaraynta qalabka: 1. Arden to ...
Golaha Wasiirada Qalabka Alwaaxa, Qaybaha router-ka CNC, Qalabka Mashiinka Cnc, Qalabka Robin Wood, Qorshayaasha Golaha Wasiiradda Qalabka Shaqaynta, Qaybaha Cnc,